Iska yaree dhexda ragga: waa maxay furaha dufanka gubanaya? | Ragga Stylish
Michael Serrano | | Ku habboon, Fitness
Miyuu surwaallada aad jeceshahay mar dambe kaa xirmin? Dhimista dhexda ragga waxay u baahan tahay dadaal badan (waa meesha ugu horeysa ee baruurtu ku urursato guud ahaanna tan ugu dambeysa ee ay ka baxdo), laakiin tababarka saxda ah iyo cunada qof walba wuu ku guuleysan karaa.
Ragga waxay u muuqdaan inay ku urursadaan baruur badan qeybta dhexe, xagga hore, dhinacyada ama gadaasha. Kordhinta cabirradu waa mid ka mid ah cawaaqibka, laakiin ka sarreeya arrinta bilicsanaanta, waxaa jira caafimaad. Baruurta caloosha waxay la xiriirtaa buurnida, cayilkuna wuu kordhiyaa halista cudurada sida sonkorowga, dhiig-karka, wadne xanuunka, ama kolestaroolka sare.
1 Dhexdaada intee dherer tahay?
2 Tababar iyo cunto
2.2 Iska yaree kalooriyada
Dhexdaada intee dherer tahay?
Waxa ugu horeeya waa inaad hubiso, inaad ubaahantahay inaad talaabo kaqaado arinta. Daawada waxaa loo tixgeliyaa taas wuxuu bilaabaa inuu khatar ku ahaado ninka markuu dhexda ka kor maro 100 cm oo wareeg ah.
Qiyaasta cajaladda ayaa kuu muujin doonta haddii aad u baahan tahay inaad lumiso khadkaaga dhexda ama cabbirkeedu uu ku dhaco xadka caadiga ah, taas oo ay tahay inaad u sii wadato sidii hore, maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay inaad dhab ahaan wax u qabanayso si sax ah. Ku duub cajaladda dhexdaada (barta saxda ah waxay ka koreysaa xuddunta) oo hubi inta ay leeg tahay. Waa lagama maarmaan in la istaago oo looga tago caloosha dabacsan.
Haddii aad rabto inaad kalsooni badan yeelato, sidoo kale waad xisaabin kartaa saamigaaga dhexda-dhererka. Aad u fudud. Si aad u ogaatid ICA-gaaga waa inaad kaliya u qaybisaa wareegga dhexdaada dhererkaaga (labada sawir waa inay ahaadaan centimitir). Xadka kiiskan waa 0.5 (0.6 haddii aad ka weyn tahay 40 sano).
Ma jecli inaad cabirto cajalado ama miisaanno? Kadib tixgeli inaad u isticmaasho surwaaladaas hore tixraac iyo dhiirrigelin. Markay mar labaad xidho dhib la’aan waxaad ogaan doontaa inaad gaadhay himiladaadii.
Tababar iyo cunto
Dariiqa kaliya ee lagu yareyn karo khadka dhexdaada waa in aad jimicsi sameyso oo aad cunto caafimaad. Waxaa lagu gaari karaa oo keliya tababarka, laakiin maskaxda ku hay in caawimaad la'aanta cuntada, in wadno badani ay lama huraan tahay. Isla sidaas oo kale ayaa dhacda haddii aad kaliya cuntid. Taasi waa sababta keentay in wadarta guud ee labadaba lagula taliyo.
Natiijooyinka ma imaanayaan habeen keliya. Yaraynta khadka dhexda ee ragga si weyn ayey u qaadan kartaa ilaa bil ... iyo xitaa dheeri. Waxaa lagugula talinayaa inaad yeelato dulqaad kugu filan, noqosho joogto ah oo, iyo wixii ka sareeya, aad ku wajaho geedi socodka oo dhan xasiloonida maskaxda inaad ogaato in, ka dib markii aad bedesho caadooyinkii hore ee kuwa caafimaadka, ugu dambeyntii waxaad ku socotaa wadada saxda ah.
Yaraynta dhexda ragga waa mid aad u adag haddii aad ku noolaato nolol deggan. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la guuro. Laakiin qaabkee? Khubaradu waxay ka talo bixinayaan qorshayaasha caloosha oo keliya shaqeeya. Ma shaqeeyaan. Si loo kala jajabiyo caloosha waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo boqolkiiba inta dufanka jirka, taasina waxay tusineysaa in jirka oo dhan la shaqeeyo.
Isku dar wadnaha iyo tababarka xoogga saddex jeer ama ka badan usbuucii (Xusuusnow inaad keydiso ugu yaraan hal maalin nasasho) waxay kaa caawin doontaa inaad gubto baruurta intaad ka sii xoogaysanayso.
Bannaanka waxaad ku heli kartaa wanaag tababarka wadnaha si aad u lumiso caloosha iyada oo loo marayo isboortiga sida orodka, baaskiil wadista ama socodka. Haddii aad gudaha ka sii badan tahay, dhidid dhudhunka lagu riixo, mashiinnada elliptical, ama baaskiilada taagan.
Marka ay timaado tababarka xoogga, waxa ugu caansan waa in la qoro jimicsi. Waa meesha laga helo dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah inay awoodaan inay kordhiyaan culeyska usbuuc ilaa usbuuc. Si kastaba ha noqotee dad badan ayaa doorta inay sameeyaan iskood. Haddii aadan miisaan lahayn, waxaad xoojin kartaa muruqyadaada adoo isticmaalaya culeyskaaga. Waayo, waxaa ka mid ah fadhi-ku-riix, riixitaanno, fadhiisimo, iyo looxyo ku jira tababarkaaga.
Iska yaree kalooriyada
Xakamaynta cuntadaada sidoo kale waxay lagama maarmaan u tahay calooshaada inuu yareeyo cabirkiisa. Taasina waa uruurinta dufanka caloosha waxay soo muuqataa marka kalooriyadu ka badan yihiin kuwa la gubay. Si loo xaliyo dhibaatada waa inaad jimicsi sameysaa adigoo goynaya kalooriyada cuntada. Xaaladdaani waxay ku riixaysaa jirkaaga inuu isticmaalo baruurta ku keydsan dhexda.
Ka-saarista cuntada (ama yaraynta inta ugu badan ee suurtogalka ah) qaadashada cuntooyinka soo socda ayaa kaa caawin doona inaad yareyso kalooriyo badan, iyo sidoo kale hagaajinta tayada cuntadaada. Laakiin haddii mid ka mid ah cuntooyinka soo socdaa ay yihiin daciifnimadaada, waad ku hayn kartaa cuntadaada abaalmarin toddobaadle ah. Kaliya waa inaad hubisaa inaadan si joogto ah u cunin ama xad dhaaf ah.
Chips baradhada iyo boorso
Cabitaannada fudud iyo cabitaannada la baakadeeyay
Casaan iyo hilib warshadaysan
Ku beddel cuntooyinkan kalluunka, digaagga aan maqaarka lahayn, digirta, khudradda, khudaarta, cagaarka, miraha dhan, lowska, iyo iniinyaha. Hubso inaad ku kariso cuntadaada foornada, solay ama uumiga si aysan dhexdaadu fursad ugu helin inay markale dufan isku urursato..
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Dhexda iska yaree ragga
Waan akhriyay dhammaantood waana walaacsanahay, waan xaqiijin doonaa himiladayda aan ballanqaaday.
Jawaab Michel H. Velarde
Barnaamijyada socda ee ugu fiican